दाङमा सिकार खेल्न संगै गएका साथीले गोली हानेर पाैडेलकाे हत्या – Sidha Patra
भत्र कुण्डा सा ब उ स
दाङमा सिकार खेल्न संगै गएका साथीले गोली हानेर पाैडेलकाे हत्या
दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ बराहा खुटीका ४५ बर्षीय खुसलराम पौडेललाई उनकै साथीले गोली हानेर हत्या गरेका छन् । गाउँकै साथीहरु संग सिकार खेल्न भनेर जंगलमा गएको र त्यही क्रममा उनीमाथि गोली प्रहार भएको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख शिवबहादुर सिंहका अनुसार संगै सिकार खेल्न गएका व्यक्तिले नै पौडेललाई गोली हानेको खुल्न आएको जानकारी दिनु भयो ।
पौडेलसंगै सिकार खेल्न गएका अन्य सबै फरार रहेको र उनीहरुको खोजी कार्य भइरहेको डिएसपी सिंहले बताउनु भएको छ । यसैबीच प्रहरीले घटना बुधवार दिउँसो घटेको जस्तो अनुसन्धानवाट देखिन आएको पनि बताएको छ । जनावर ठानेर पौडेलाई साथीले नै गोली हानेको भन्ने अनुमान भइरहेको छ । उहाँले भन्नु भयो,गोली लागि सकेपछि उनीहरुले घाइतेलाई उद्धार गरेर राजमार्ग सम्म ल्याएको हुन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । उनीहरुले प्रहरीलाई खवर नगरेपनि गाउँ घरमा र उनका परिवारका सदस्यलाई खवर गरेको खुल्न आएको प्रहरीले बताएको छ ।
घाइते पौडेलका छोरा एम्बुलेन्स चालक रहेको र उनलाई खवर भएपछि छोराले नै घाइते बुवालाई एम्बुलेन्सवाट नेपालगञ्ज पु¥याएको प्रहरीले बताएको छ । यसअघि प्रहरीले पौडेल पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत लमही नगरपालिका वडा नं. ९ च्याउ खोलामा बुधवार राति साढे ९ बजेको समयमा फेला परेको जानकारी दिएको थियो । उनका ढाडमा ३ र तिघ्रामा २ गोली लागेको प्रहरीले बताएको छ ।
घाइतेलाई थप उपचारका लागि भारतको लखनउ लगिएको छ । प्रहरीका अनुसार सिकार खेल्न गएका सबैको पहिचान भइसकेको । यसैबीच प्रहरीले विहीवार च्याउ खोला क्षेत्रवाट रगत लागेको एउटा भरुवा बन्दुक बरामद भएको जानकारी दिएको छ ।
राजपुरमा १११ औं नारी दिवश विभिन्न स्थानमा मनाइयो
शिवरात्री नजिकिंदै गर्दा देउखुरीको जखेरा तालमा पर्यटकको घुँइचो
दाङको देउखुरीमा बस र मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किदा दुई जनाको मृत्यु
देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघको अध्यक्षमा खनाल सर्वसम्मत चयन